မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): ဖုန်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ ဆော့ဝဲတွေကို နောက်တစ်ခါပြန်သုံးဖို့Backup ယူနည်း
ဖုန်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ ဆော့ဝဲတွေကို နောက်တစ်ခါပြန်သုံးဖို့Backup ယူနည်း
ဘာလို့ အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေလည်းဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာက ဆော့ဝဲရယူဖို့ 
ပြည်ပလူတွေလောက် မလွယ်ဘူး ။ အဲ့တော့ ဖုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့သုံးနေတဲ့ဆော့ဝဲကို
ဖုန်းပျက်သွားတဲ့အခါ နောက်ထပ်ဖုန်းတစ်လုံးမှာ သုံးချင်တဲ့အခါ ပြန်သုံးဖို့ အတွက်
Apk ဖိုင်အဖြစ် Backup လုပ်ပေးမယ့် ဆော့ဝဲတစ်ခုမလို့ ထည့်ပြီး သိမ်းထားဖို့ ပါ
ပြည်ပကလူတွေက Google Play ကနေ ဆော့ဝဲတွေပေါတယ် လိုင်းလည်းကောင်း
ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်က တစ်ယောက်ယောက်က အဲ့ဆော့ဝဲလေးပေးပါ ဆိုလာရင်
ဒီနည်းလေးနဲ့ Backup လုပ် ရလာတဲ့ဆော့ဝဲကိုမှ gmail ကနေပြန်ပို့ ပေးလိုရတယ်
အဲ့တော့ ပြည်တွင်းရော ပြည်ပရော အဆင်ပြေတယ်လို့ ပြောတာ ။ တခါတလေမှာ
မြန်မာပြည်က သူငယ်ချင်းတွေ viber ထည့်ချင်လို့Skyp ထည့်ချင်လို့ဆိုင်သွား
ပိုက်ဆံကုန်တယ် ။ နောက်တစ်ခု ဖုန်းလေးလာလို့Format ချပီး Reset လုပ်ရင်
ဆော့ဝဲတွေ အဆင်သင့် တန်းပြန်ထည့်လို့ ရတယ် ။ ဒီနည်းနဲ့သိမ်းပြီး စတစ်ထဲ
သိမ်းထား သူများလိုချင်လည်း ပြန်ပေးလို့ လွယ်တယ် ။ အဲ့တော့ လိုအပ်တယ်လို
လိုချင်ရင် ဒီလင့်မှာ- http://www.mediafire.com/?software backup
လိုချင်ရင် ဒီလင့်မှာ - https://play.google.com/Astro apk backup
လုပ်နည်းက အောက်မှာဖတ် မိအော် ရေးပို့ ပေးထားတာပါ
ကိုယ့်် Phone ထဲမှာရှိတဲ့ Run ပြီးသား Software ကို
တခြားသူဆီ Copy ပြန်ပွားချင်ရင်.....
Astro Software ကို မိမိ Phone (Android) မှာ Run လိုက်ပါ
ပြီးလျှင် Application Backup ကိုနှိပ်ပါ
ဒါဆိုရင် မိမိဖုန်းထဲမှာ Run ထားတာအကုန်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်
အမှန်ချက် တပ်ပြီး အပေါ်နားလေးက
Backup ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ
ဒါဆိုရင် My Files ထဲက Backups ဆိုတာထဲကို
Software လေးရောက်သွားလိမ့်မယ်.. အဲဆိုရင်
မိမိပို့ချင်တဲ့သူများကို Copy (or) Share လုပ်ပီး
Mail (ဒါမှမဟုတ်) Bluetooth နဲ့ပို့လို့ရပါပြီရှင်... :P
Author Anonymous at 4:20:00 PM
Labels: Backup APK
thetnaingooapril11@gmail.com ကို ပို့ပေးပါနော် မျှော်နေမယ်နော်ကိုကို။ ဟိဟိ
တိန် ပို့ လိုက်ပီနော်...ဒီဆော့ဝဲရောက်လာရင် ဦးလေးဖုန်းထဲက ဆော့ဝဲတွေ ပြန်ပို့ ပေးနော်...
phyo wai said...
mptphyowai@gmail.com ကို ပို့ပေးပါဦးအစ်ကိုရေ..ယူလို့မရလို့ပါ အစ်ကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်..နော် အစ်ကို ပညာဒါနတွေ ဒီထက်ပိုမို
အကို Sysyem apps တွေကို ကလိရင်း ဖျက်မိလို့Contects ကို Addလုပ်လို့ မရတော့ ဘူး ။... Mobomarket လို PC နဲ့ချိတ်ပီးတော့ တော့Contact ကို သွင်းလိုရတယ် ။့ဖုန်းကနေ သွင်းလို့ မရတော့ဘူး။ ကိူ ညီနိုင်ရင် ကူညီပေးပါဦး ဗျာ . Contacts အပ်မာ် ဆို Pc နဲ့ဂျိုင်းဂျိူင်းနေရလို့ . ကူ ညီနိုင်ရင် ကူညီပေးပါဦးနော် အကို ကျွှန်တော် Email က yaekyawhtet@gmail.com ပါ အကို ..
အကို ကျွန်တော်လည်း down မရလို့cobralionmz@gmail.comထဲကိုပို့ပေးလို့ရမလား အကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်